Samsung manafika an'i Apple amin'ny horonantsary farany navoakany: 'Samsung Galaxy: Growing Up' | Vaovao momba ny gadget
Samsung nanafika an'i Apple tamin'ny horonantsary farany navoakany: 'Samsung Galaxy: Mitombo'
Ruben gallardo | | Apple, Finday
Aza adino izany ny fampiasana telefaona dia niova tanteraka tamin'io taona 2007 io rehefa niditra an-tsehatra i Steve Jobs mba hampisehoana ny maodelin'ny iPhone voalohany. Hadinonay ny bokotra ara-batana, ny efijery fanoherana ary ny menu manahirana mba handrosoana hanatanterahana hetsika iray; Ny mpampiasa iOS interface dia: ary ary - tena mora ampiasaina.
Na izany aza, raha misy orinasa izay ao ambadiky ny Apple foana ary izay mitana ny laharana voalohany amin'ny varotra manerantany dia Samsung izany. Teo foana ireo duel ao anaty tambajotra. Saingy nanao dingana lavitra kokoa ilay Koreana ary nanafika ireo lehilahy Cupertino indray tamin'ny horonantsary farany mitondra ny lohateny hoe "Samsung Galaxy: mitombo". Izany hoe, avy amin'ny Samsung dia milaza aminao izy ireo fa raha te hivoatra amin'ny sehatry ny finday ianao dia mahazo Samsung Galaxy.
Ny horonantsary, raha tsy hilaza afa-tsy izay dia mahaliana. Ny orinasa mandray fitsidihana avy amin'ny finday Apple voalohany tamin'ny 2007. Ireo filaharana dia tsy nisy fiafarany teo anoloan'ny Apple Stores samihafa. Ary fomba fanao ny namoaka izany tao anaty boaty tao an-trano. Na izany aza, mandeha ny fotoana ary tadidin'i Samsung ny olan'ny fitahirizana anatiny ny terminal; maka sary ary inona hafatra iray dia hanondro eo amin'ny efijery fa tsy nanana habaka ampy ianao hamonjy ny fitifirana. Tsarovy fa ny Samsung Galaxy dia nisy slot karatra fitadidiana.
Etsy ankilany, tonga ny fotoana ho an'ny voalohany phablets avy amin'ny Samsung, ny Samsung Galaxy Note. Tamin'izany fotoana izany ny iPhone 5 sy iPhone 5S dia nanan-kery. Ary iray amin'ireo zava-baovao farany amin'ny sokajy vokatra vaovao an'ny Samsung ny fahafahanao mampiasa a penina —Ny S-Pen malaza— handray an-tsoratra an'io efijery 5-inch io. Ity nandao ny terminal Apple tamin'ny fatiantoka ratsy rehefa te-handray naoty haingana.
Nandeha ny taona ary ny iPhone 6, iPhone 6S koa dia manohitra ny fampidirana fiasa tena manokana iray izay nireharehan'ny Samsung Galaxy S7 sy S7 Edge: ny fahaizana mando ary manohy miasa. Ao amin'ny horonantsary navoakan'ny Koreana no ahitantsika ny fomba ilay mpihetsiketsika amin'ilay horonantsary - mpankafy matotra an'i Apple - dia tokony hametraka ilay iPhone vaovaony am-bilia.
Farany, tonga ny fotoana hitsikerana ny tsy fisian'ny Jack Audio 3,5-millimeter ho an'ny fampifandraisana tselatra. Manomboka eo, raha te hampiasa headphones mandritra ny androm-piainana ianao, miaraka amin'ny fifandraisana mahazatra dia tsy maintsy mampiasa tadim-poitra sy tariby bebe kokoa eo anelanelany. Eny, nanohy ny jack audio i Samsung, fa ny tadiaviny dia ny manaisotra ireo tariby bebe kokoa eo anelanelan'ny tsara kokoa. Ary aiza no hanafika an'i Apple? Miaraka amin'ny famandrihana tsy misy tariby: ny Samsung Galaxy S8 vaovao sy ny Note 8 dia azo apetraka amin'ny base induction ary ampiakarina tsy misy tariby. Ahoana ny momba ilay iPhone 8 vaovao sy iPhone X? Iza no efa manohana an'ity mety hitranga ity.
Mba hamaranana ny horonantsary dia hitantsika fa manjavozavo amin'ny mpampiasa iPhone ny zavatra rehetra azon'ny tarehin-tsoratra hafa ao amin'ilay horonan-tsary atao ary manapa-kevitra ny hametraka ny iPhone ao anaty vatasarihana izy. Inona no ataonao manaraka? Tadidio io fotoana io tamin'ny 2007 ary sokafy voalohany ny iray amin'ireo terminal farany manaparitaka farany indrindra: Samsung Galaxy Note 8, ny sainam-pirenen'ny mpamokatra farany.
Taty aoriana, nivoaka ho mpampiasa iray hafa an'ny "Galaxy Clan" an'i Samsung izy ary nanapa-kevitra ny handingana Apple Store izay milahatra ny mpanjifa amin'ny iPhone X farany: terminal iray misy efijery rehetra, miaraka amina endrika mamaky tany izay manilika ny fomba mahazatra an'ny iPhone tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny mpampiasa dia nanao veloma ny horonantsary tamin'ny alàlan'ny fihifikifiany ny lohany ary tamin'ny fangorahana an'ireo mpampiasa izay mbola tsy nanao ny dingana ary namela ny "Apple Era" any aoriana.
Manaiky an'io horonan-tsary io ve ianao? Mieritreritra ve ianao fa iray ambadiky ny Samsung sy ireo orinasa hafa ao amin'ity sehatra ity i Apple? Mihevitra ve ianao fa nandao an'i Cupertino ny aura mahagaga? Na ny mifanohitra amin'izay, nasehonao azy indray tamin'ny iPhone X-nao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Samsung nanafika an'i Apple tamin'ny horonantsary farany navoakany: 'Samsung Galaxy: Mitombo'
Azonao atao izao ny manafoana tanteraka ny bokotra Bixby
Tian'i Microsoft hiverina any amin'ny smartphone ny jack 3,5mm